Meydadka ku dhowaad 200 oo ruux oo Galabta la aasay iyo Dhimashada oo sii korortay | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
Meydadka ku dhowaad 200 oo ruux oo Galabta la aasay iyo Dhimashada oo sii korortay
Oct 15, 2017 - jawaab
Waxaa sii kordhaya Khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay Qaraxii xooganaa ee shalay ka dhacay Isgooska Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa galabta aasay meydadka dad gaaraya 165-qof kuwaa oo la aqoonsan waayay heybtooda , waxaana meydadkan ay ahaayeen kuwa gubtay iyo sidoo kale kuwa jirkooda uu gogo’ay.
Meydadka la aasay ayaa laga aruuriyay isbitaalo kuyaala magaalada Muqdisho oo la geeyay, waxaana adkaatay in meydadkaasi eheladooda la helo maadaama muuqaalkooda uu noqaday kuwa aan la aqoonsan karin.
Ehelada dadka ay ka maqan yihiin ayaa xalay ilaa saakay taagnaa Isbitaalada kuyaala magaalada Muqdisho si ay u helaan dadkooda nolol ama geeri hasa ahaatee waxaa ku adkaatay in ay aqoonsadaan meydadka qaar oo lasoo bandhigay.
Khasaaraha dhimasho ee ka dhashay qaraxan shalay galab ka dhacay Isgooska Zoobe ayaa kor u dhaafay labo boqol oo qof, waxaana meydadka qaar ay noqdeen kuwa la aqoonsaday oo dadkooda aasteen halka kuwa kalana la aqoonsan waayay.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo tagay qaar kamid ah Isbitaalada Muqdisho ayaa sheegay in qaraxii shalay ku dhinteen dad ka badan 230-qof sidoo kale ku dhaawacmeen dad kor u dhaafaya 300-qof oo kale.
Guddi uu Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya u saaray qiimeynta khasaaraha ka dhashay qaarxii Zoobe ayaa la filayaa in dhankooda ay faah faahin ka bixiyaan khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay qaraxii shalay.